Momba anay - Dongguan Hengyao Ultrasonic Machinary Co., Ltd.
Dongguan HengYao Ultrasonic Machinary Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2016, dia orinasa mpamokatra matihanina miaraka amina famolavolana milina ankapobeny (masinina saron-tarehy, masinina tsy vita tenona, milina mandeha ho azy ultrasonic), famokarana bobongolo mandeha ho azy isan-karazany, ary koa famatsiana ary ny varotra kojakoja.
Momba an'i Hengyao: Dongguan HengYao Ultrasonic Machinary Co., Ltd avy amin'ny teknolojia mandroso any Japon sy Taiwan. Miaraka amin'ny 20 taona ny indostrian'ny fahamboniana, mifantoka amin'ny fikarohana, fanamboarana ary ny varotra milina mandeha ho azy tsy tenona izahay. Ny orinasanay dia ampiasain'ny olona zokiolona amin'ny tsipika milina mandeha ho azy tsy tenona. Ny orinasantsika vondrona dia any Shenzhen, Dongguan, Foshan, Xiamen, Suzhou, Nantong sns.
Sehatra fandraharahana: tsipika famokarana masom-bava mandeha ho azy, masinina fanamboarana tarehy misaron-tava tarehy, tsipika fivorian'ny valizy miaina mandeha ho azy, masinina fanaovana maska ​​3D mandeha ho azy, masinina fonosana masom-baravarana masinina, milina fanaovana paosy sivana rivotra mandeha ho azy. Fampiharana kojakoja sy rafitra ultrasonic ho an'ny milina tsy tenona isan-karazany. Ary nivoatra tsy miankina izahay ary nanamboatra karazana milina mihoatra ny 30. Ireo fitaovana marani-tsaina sy milina fanaingoana olona dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny asa, fitsaboana, fidiovana, fanabeazana, hotely, fiaramanidina, tarehy.
Hevitry ny orinasa: "vokatra voalohany, teknolojia aloha, kalitao aloha, ary serivisy aloha". "Mamorona lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifa" no tanjontsika. 20 taona traikefa sy mihoatra an'ity sehatra ity dia andao isika hanao fandrosoana miaraka, ary hanao toko vaovao hatrany amin'ny tsipika milina mandeha ho azy tsy tenona.